BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Nabadgelyo Bush House
Nabadgelyo Bush House
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 Luulyo, 2012, 16:23 GMT 19:23 SGA
Kadib toddobaatan sano oo ay BBC dhageystayaasha kala hadli jirtay daarta caanka ah ee Bush House ee ku taalla bartamaha London, ayaa wararkii u dambeeyey oo ku baxay afka Ingiriiska waxaa maanta laga sii daayey Istuudiyaasha BBC ee Bush House.
Aqalka Bush House waxa ay BBC ka hadleysay muddo ka badan 70 sano
BBC qaybta dibedda la hadasha waxay soo degtay dhisme cusub oo aan aad uga fogeyn daarta Bush House oo isla bartamaha London ku yaal oo la yiraahdo New Broadcasting House.
Waa dhisme casri ah oo u habeysan warbaahinta qaybaheeda kala duwan, waxaana ku baxday dhismahan lacag dhan hal bilyan iyo bar dollar.
Agaasimaha Guud ee BBC Mark Thompson ayaa waxa uu dib u eegayaa taariikhda aqalka caanka ah ee Bush House.
Sidoo kale Cabdirisaaq Xaaji Maxamed Siraad oo daarta Bush House ee BBC muddo dheer ka shaqeeyay ayaa waxa uu uga warramay Farxaan Maxamed Jimcaale.
Xabad joojinta Qaza oo burburtay
Xildhibaan kale oo Muqdisho lagu dilay
Ciidamo AMISOM ah oo Soomaaliya laga joojiyay Ebola dartii03:33
Faa'iidada naas-nuujinta dhallaanka03:38